Kuma Raaxaysan Karo War-Wareega Magaalada & Kursiga Kaydka, Waa Qasab In Wax Isbadalaan-Ivan Rakitic Oo Afka Furtay. - Gool24.Net
Kuma Raaxaysan Karo War-Wareega Magaalada & Kursiga Kaydka, Waa Qasab In Wax Isbadalaan-Ivan Rakitic Oo Afka Furtay.
October 9, 2019 Mahamoud Batalaale
Xidiga xulka qaranka Croatia iyo kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic ayaa si adag uga hadlay xaalada xun ee uu kaga jiro Camp Nou kadib markii uu xili ciyaareedkan wayay booskii joogtada ahaa ee uu Barca ka soo haystay.
Ivan Rakitic ayaa shaxda kooxda Barcelona si joogto ah ugu baxayay tan iyo markii uu Camp Nou soo gaadhay sanadkii 2014 kii laakiin waxa uu hadda arkayaa isaga oo kursiga kaydka ku caajisay.
Ivan Rakitic oo hadda ku maqan waajibaadka xulka qarankiisa Croatia ayaa sheegay in aanu u dul qaadan karin xaalada uu hadda Barcelon kaga jiro wuxuuna ku dooday in aanu ku raaxaysan karin uu magaalada Barcelona iska dhex war-wareego oo uu kaydka fadhiyo.
Inkasta oo uu Ivan Rakitic qirtay in uu wali doonayo in uu Barcelon ka sii ciyaaro, haddana meesha kamuu saarin in uu ka dhaqaaqi doono Camp Nou maadaama oo uu balan qaaday in uu doonayo sidii uu xaaladiisa u badali lahaa.
Ugu horayn Ivan Rakitic oo ka hadlaya xaalada uu Barca kaga sugan yahay ayaa yidhi: “Way adag tahay, sababtoo ah waxaan doonayaa in aan ciyaaro ee ma aha kaliya in aan qayb ka ahaado kooxda. Wax walba oo suurtogal ah ayaan samayn doonaa si aan u badalo”.
“Laba sanadood ayaa ka hadhsan heshiiskayga mana jirto meel ka fiican Barcelona, kooxda aduunka ugu fiican, laakiin ma doonayo in aan ku raaxaysto war-wareegista magaalada iyo kursiga kaydka” ayuu Rakitic oo warkiisa cadaynayaa hadalkiisa raaciyay.
Ivan Rakitic ayaa cadeeyay in uu arintiisa kala hadlay madax wayne Bartomeu iyo kabtanka kooxdiisa ee Lionel Messi wuxuuna yidhi: “Waxaan kala hadlay dadka kooxda, qof kastaaba waxa uu ogaa in aan haystay doorashooyin kale. Waxaan doonayaa in aan dagaalamo, sidaa daraadeed, waxay kooxdi uu arki kartaa in aan garoonka wax ku gaadhsin karo”.
“Waxaan doonayaa in aan taageerayaasha uga mahad celiyo jacaylkii ay usbuuc dhamaadkan ii muujiyeen, laakiin haddii ayna waxba isbadalin, waxaa waajib nagu ah in aanu wada fadhiisano oo aan markale xaalada ka wada hadalno”. ayuu Rakitic hadalkiisa ku daray.
Hadlka Ivan Rakitic ayaa si cad u muujinaya in aanu ku sii jiri karin xaalada kursiga kaydka waxaana loo fahmay in ay tahay fariin uu ku cadaynayo in suuqa bisha January uu xal ka dhigan karo bixitaan haddii ayna waxba isbadalin.
Ivan Rakitic ayaa 187 daqiiqo oo kaliya xili ciyaareedkan soo ciyaaray wuxuuna booskiisii u waayay Arthur Melo iyo Frenkie De Dejong waxaana la filayaa in Valverde uu wali kaydka ku sii hayn doono Rakitic taas oo waayihiisa Camp Nou soo gaba gabayn karta.